लक्ष्मी बैंक र नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसनबीच सम्झौता - Aathikbazarnews.com लक्ष्मी बैंक र नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसनबीच सम्झौता -
लक्ष्मी बैंक लि. तथा नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसन सेन्टर बीच दुई पक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता पश्चात् बैंकिङ च्यानेल मार्फत् एग्रि–स्टार्ट अपहरु तथा एग्रि–एसएमइहरुका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गरिने छ ।
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचलाई लाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य सहित लक्ष्मी बैंक लि. तथा नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसन सेन्टर बीच दुई पक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसन सेन्टर कृषि व्यवसायको लागि सल्लाह तथा परामर्श सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्था हो ।
लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल एग्रिबिजिनेश इन्नोभेसन सेन्टरका प्रतिनिधी बीच सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यस पछि बैंकिङ च्यानल मार्फत् एग्रि–स्टार्ट अपहरु तथा एग्रि–एसएमइहरुका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गरिने छ ।
एसबीआइ बैंकले डाक्यो पुस २८ गते साधारणसभा, १५% लाभांश पारित गर्न प्राइम लाइफको पनि एजीएम
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई होटेल ड्यानडलियनमा विशेष छुट